Fifidianana 2012 Ghana, Avy Eny Amin’ny Vatam-Pifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2012 13:52 GMT
Namonjy ny biraom-pifidianana ny Ghaneana ny andron'ny 7 Desambra 2012, hifidy filoha sy parlemanta vaovao. Ireo tena mpifaninana lehibe hofidiana ho filoha moa dia ny filoha ankehitriny John Dramani Mahama misolo ten ny antoko mitondra ny National Democratic Congress (NDC = Kongresy Demokratika Nasionaly) sy Nana Akufo-Addo avy amin'ny mpanohitra avy ao amin'ny New Patriotic Party (NPP = Antoko Tia Tanindrazana Vaovao). Mitodika any amin'ny fanapaha-keviny amin'ny hoavin'ny firenena afrikana mitombina ara-politika indrindra amin'ny alalan'ny voka-pifidianana ny tany manontolo. Saingy mampahatsiahy antsika i @ayittey:
@IDEGGhana Mampahatsiahy an'i Josef Stalin: “Tsy ireo mifidy no mikaonty fa ireo manisa vato”
Amin'ny ankapobeny raha araka ny tatitra avy ny eny amin'ny toera-pifidianana dia nizotra nilamina ny fifidianana. Saingy nisy ihany koa ny siokan'ny tatitra fividianam-bato, rotaka, fanemorana, fitokonana ary tsy fisian'ny vatam-pifidianana. Eto ambany ny fehin'ny sioka mifandraika amin'ny fifidianana eo hita tamin'ny fijerena ny tenifototra #ghanaelections.
Biraom-pifidianana SDA gbogba tsy mifidy… tsy misy fitaovana ifidianana hatry ny maraina. Adiny telo sy tapany mihoatra.
manahy ny mpifidy ao amin'ny Kintan'ny East school fa tsy mbola ao ny vata-pifidianana.
Korontana ao amin'ny fari-pifidianana Ablekuma avaratra. Natsahatra ny fifidianana.
Fakana an-keriny ny vatam-pifidianana etsy sy eroa… Manhyia, Kentinkrono, Ablekuma, Inona no mety horaisina amin'ity fitokonana mialoha ny fotoana ity?
miroborobo ny fividianam-bato miroborobo ny bizina
Nilaza tsy nifidy ny olom-pirenena any Nkwanta Atsimo any amin'ny faritra Volta noho ny tsy fahampian'ny [fampandrosoana] any amin'ny faritra.
Nisy baomba nandatsa-dranomaso nipoaka tany amin'ny fari-pifidianana Ablekuma Avaratra hampihemotra ny olona tsy hanakorontana
Filaharana lava dia lava:
Nanomboka aloha dia aloha tahaka ny tamin'ny folo ora alina ny filaharana tany amin'ny faritra maro any Kumasi izay ahitana ny ekipa mpiambina miaro ny vahoaka eo amin'ny manodidina
Nanomboka nisy ny filaharana hatry ny omaly tamin'ny fito ora hariva tao amin'ny @ Tip Toe Lane Accra hifidianana. Mampiasa vato ny olona hanamarihana ny filaharany ary matory eo amin'ny biraom-pifidianana.
Nanomboka nilahatra hatramin'ny telo ora maraina teo amin'ny biraom-pifidianana ny olona, manamarika ny toerana misy azy amin'ny vato sy siny. Te-hifidy mialoha ny rehetra.
Avy nifidy ihany rehefa niandry 5 ora!
Saingy, raha ny voalazan'i @Nii_logologi, haingana kokoa ny fifidianana tany Tema:
Latsaky ny dimy minitra dia vitako… tsy misy toerana tahaka an'i Tema
Nitranga ny tsy noeritreretina mihitsy – Vaomieran'ny Fifidianana nosamborina noho ny tsy nametrahany fitomboka ny vatom-pifidianana tany amin'ny faritra Ashanti
Noafahana ilay mpikambana vaomieram-pifidianana. Nilaza ny polisy fa ho amboariny ny milina simba…
mpikamban'ny vaomieran'ny fifidianana nosamborina noho ny tsy nametrahany fitomboka ny vatom-pifidianana 200
Nisoratra anarana in-droa voasambotra raha nikaza ny hifidy tany amin'ny fari-pifidianana Tarkwa-Nsuaem
Farany, araho ny @Africanelection sy ny @ghanaelection ao amin'ny Facebook, whatsapp sy ny BBM raha hizara sary sy tantaran'ny fifidianana:
Alefaso ny sarin'ny fifidianana ary andao hikarajia aminay momba ny fifidianana eto Ghana ao amin'ny whatsapp 0241995737, 0202841029 & 0244838097
Ao amin'ny facebook ihany koa izahay, azonao atao ny manindry “tia” ao amin'ny pejinay ihany koa. Miaraha aminay ao amin'ny whatsapp sy ny BBM 28F11BFF +23341995737